ụlọ ọrụ ọkụ | China na-emepụta ọkụ, ndị na-ebubata ya
Klas 1 obere mkpọtụ mkpọtụ na-egosi ọkụ ọkụ
Ọ na-ejikọ nkesa ọkụ dị mma, obere ike ọkụ na njikwa ọkụ n'ime otu ihe na-enye ọfụma iji nweta ọkwa ọkụ ọfịs dị elu. Enwere ike ijikọ ya na nhọrọ abụọ, atọ, anọ, nke kwesịrị ekwesị maka mkpa dị iche iche nke nkesa ọkụ dị nro, ọnụọgụ ọkụ karịa 70% obere olu, na-enye aka ibugharị, nchekwa, ntinye. Akwụkwọ ozi "V" na-anọchi anya agbakwunyere, na leta "X" na-anọchi elu ụlọ. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ọfịs, ọfịs, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ndozi, ụlọ nrụpụta, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na ebe ọha na eze.
Energy ịzọpụta 150W 250W 400W Ikanam Ngwuputa ìhè
Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ nchere, ụlọ nchere, ebe ngosi, mgbatị ahụ na ọkụ ndị ọzọ.
Ikanam mwekota braket ìhè maka ọfịs, obibi, commericial were
Novel design, mara mma anya, obere olu. Kwesịrị ekwesị maka ọfịs, ụlọ, ọkụ azụmahịa, wdg.
Bright ìhè na-abịa kpamkpam dị larịị, na a wider luminance n'akuku. Ọdịdị sekit pụrụ iche, iji zere otu oriọna na-adịghị mma na-emetụta mmetụta zuru oke, na-enweghị nnyonye redio, agaghị emerụ gburugburu ebe obibi. Nchekwa ike, nchapụta dị elu, enweghị mercury, enweghị infrared, ọ dịghị ULTRAVIOLET, enweghị nnyonye aka electromagnetic, enweghị mmetụta ọkụ, enweghị ụzarị ọkụ, enweghị nsogbu stroboscopic. Light light na mfe iji wụnye. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọfịs, USES azụmahịa, ụlọ obibi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ ebe achọrọ ịchekwa ike na ọkụ na-acha ọkụ agba agba.
18W 40W 80W recessed Ikanam SMD ọkụ dị ọcha maka ụlọ dị ọcha
Okpokolo agba nke oriọna di ocha di ocha ma di nso n’uko. Ahụ oriọna na mkpuchi azụ jupụtara na nchikota dị elu. Enweghị uzuzu, dị mfe ihicha, enweghị ntanye. Ngwurugwu nke kachasị ọhụrụ na-eduzi teknụzụ ọkụ na-eme ka ndụ nke ìhè dịkwuo mma, na enweghị mercury na oriọna ọdịnala ọdịnala, nke dị ezigbo mma na gburugburu ebe obibi. Hospital, ahịa ọgwụ, nri nhazi, nchekwa na ulo oru mkpocha ụlọ ọkụ ezigbo oke. A na-ahọrọ ụdị ahụ dị iche iche na ụdị ọkụ dị iche iche. Ejiri maka oge 100-10000 nke ịdị ọcha.
Mmiri nke na-egosi 9W 18W 25W LED chip type tri-proof light
Ìhè na-ezute ọkwa IP65. Waterproof, mmiri na-àmà, ájá na-àmà akara imewe, ezi uche Ọdịdị, mara mma na-emesapụ aka, igbachi imewe ọzọ ọrụ na onye-enyi na enyi, mfe iji wụnye na ịnọgide na-enwe. Onye isi oriọna na-ejide ọkụ, 250V ọkụ dị elu nke na-enwu ọkụ ọkụ ọkụ, ike dị elu dị elu, dayameta na ịdị elu nke na-agba ọkụ, ezigbo arụmọrụ kọntaktị. Novel design, kọmpat Ọdịdị, mara mma anya, mfe iji wụnye na ịnọgide na-enwe, ngwa ngwa-amalite. Okwesiri maka ime ụlọ na n'èzí nwere mmiri na-enweghị mmiri, uzuzu na-enweghị ike ịchọta mmiri.